imbobo eyodwa yokugezela ompompi obhulashiwe
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Ompompi Bakhishi BaseKhishi / I-WOWOW Bathroom Basin Mixer Taps Swivel Spout Brush Nickel
I-WOWOW Bathroom Basin Mixer Taps Swivel Spout I-Brick Nickel
isingeniso sokugeza izengezo zokugeza:
Ukuqedwa okumnyama kwe-matte: Kuvimbela ukugqwala nokugqwala ekusetshenzisweni njalo.
Kulula ukusetha: ukusetha umgodi owodwa wokufaka ngokungasebenzi.
Elula ukusebenzisa: Isibambo esisodwa sokulawulwa okulula kwamanzi abandayo nabashisayo.
2320200 imiyalo yokufaka
Le 1 isibambo sendawo yokugezela ompompi 2320201 inezinzuzo eziningi.Igcina amanzi futhi inedizayini enhle.Kungashiwo ukuthi kuyincomo yokuqala ekhishini nakompompi bendawo yokugezela.
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Sink Sink noma Basin for 1-Hole Isethaphu; Ukuphakama: 11 ″; Ukufinyelela kwe-Spout: 7 ″; Usayizi weHole: 1.4 ”(Sicela Uhlole Ubungako Bembobo yakho ngaphambi koku-oda).
Ompompi for Toilet & Bath: isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu usinki noma umcengezi, ingasetshenziswa yokugezela kanye nekhishi, arc Ephakeme futhi 360-degree ukuphotha iyasiza kosinki ababili uma wenza imisebenzi yokwandisa.
Isiteji Sensimbi Yekhishi Engagxiliwe I-Nickel engu-Stainless: ibekwazi ukukwazi ukuklwebheka kwansuku zonke nokugqwala, insimbi engenasici, nomzimba wensimbi we-zinc, onzima futhi oqinile, ofanele ikhaya, ukugeza, ikhishi, ihhotela, indawo yokudlela, ifulethi, indawo yokuhlala kanye nokunye.
I-Hardware Hardware: i-hucai hose hose enkulumweni yaseMelika ngombhalo wokuphepha, ama-valves angenayo ama-drip, kanye ne-spout engaphakathi nendawo yokuqinisekisa indawo efanelekile Yamanzi, Yonke imishini yokufaka iseyinsimbi engenasici, engenasidina futhi engaxuthiwe.
UBUDLELWANE NGESIKHATHI SEKUPHAKATHI KWAMAKHAYA: kumbozwe izinsuku ezingama-90 zokubuya kwamahhala kanye newaranti yempilo yonke!
SICELA UXHUMANE EMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2320201 Categories: Ompompi Bakhishi BaseKhishi, Ikhishi Faucets Tags: 1 Bamba, I-Nickel ehlutshiwe, Insimbi engagqwali